Tightwad Kutya Chipiri - Mahara Mafirimu e10-12-21 - iHorror
musha Anotyisa mafirimu Tightwad Kutya Chipiri - Mahara Mafirimu e10-12-21
Tightwad Kutya Chipiri - Mahara Mafirimu e10-12-21
by James Jay Edwards October 12, 2021 285 maonero
Hei Tightwads! Yasvika nguva yeimwe Tightwad Kutya Chipiri, zvinoreva kuti mafirimu emahara ekugadzirira iwe Halloween! Heano ivo!
Iyo Fog (1980), neruremekedzo rweAVCO Embassy Mifananidzo.
Huru iri nezveguta remumahombekombe riri kupemberera makore zana. Ndichiri kugadzirira mabiko, mhute inoshamisa inopinda mu… uye nayo, inouya zvakavanzika zvekare zvekare zveguta.
Iyi 1980 spookfest yaive John Carpenter yemitambo yekuteedzera kusvika pakubudirira kwake Halloween (akaita mafirimu maviri eTV panguva iyi, zvakadaro). Mune chimiro cheCarpenter, akanyora (pamwe naDebra Hill), akatungamira, akarova firimu, uye vateereri vanosanganisira mazita akadai saJamie Lee Curtis, Janet Leigh, Adrienne Barbeau, Tom Atkins, Hal Holbrook naJohn Houseman. Izvi zvakaitwazve zvinotyisa muna 2, asi ichi ndicho chepakutanga. Unofanira kuzviona, uye kuzviona uchigona pano paTubiTV.
Toad Road (2012), neruremekedzo GatebreakR.
Toad Mugwagwa ndeye shamwari mbiri dzinova dzinopengeswa nenzvimbo inozivikanwa seToad Road iyo ine runyerekupe rwekuvanza gedhi regehena. Vari pamushonga, vaviri vacho vanoenda kuToad Road. Musikana anonyangarika, uye mukomana anomuka kwapera mwedzi mitanhatu pasina kana kurangarira kwaakange ari kana nezvaakaita.
Yakaudzwa mune chokwadi, pseudo-zvinyorwa zvinyorwa zvemafirimu, Toad Mugwagwa bhaisikopo rinotyisa ra2012, rakaitwa kunyange rinotyisa nekuti mutambi waro anotungamira, Sara Anne Jones, akashaya wekudhakwa zvinodhaka sezvo firimu raiita mutambo waro kumhanya. Tarisa uone Toad Mugwagwa pano paKinoCult.
Curve (2015), neruremekedzo Universal Mifananidzo.
munyonga ndezvemuroora-uyo-uyo, munzira yekunosangana nechikomba chake nekuroora, ane dambudziko remota. Musamaria akanaka anomubatsira kunze, uye semubairo, anomupa kukwirwa. Paanoedza kumubata, anorovera nemaune rori yake uye mhepo inovharirwa… kunyangwe iye achipunyuka.
Kune yaive neinofadza, iyi firimu ra2015 rakanaka. Julianne Hough nyeredzi semusikana-mukutambudzika, uye Teddy Sears ndiye muponesi wake-akatendeuka-mutambudzi. Buda munyonga pano paTubiTV.
Skeletons muCloset (2018), neruremekedzo Cow Lamp Mafirimu.
Mafupa muKamuri i 2018 muunganidzwa wekutonhora Ngano kubva kuCrypt-esque zvikabudura zvinonyepedzera sehusiku-husiku husiku terevhizheni zvinotyisa zvinoratidza kuti mwana ari kutarisa nemubatsiri wake asina tsitsi. Ehezve, chaihwo hupenyu hunowana hunyengeri sekutyisa kuri pachiratidziri.
Pakutanga kuzivikanwa se Chop Shop, Mafupa muKamuri kupenga kunonakidza kwe retro-kitsch ine inotonhorera 80s aesthetic, kwete zvachose zvakasiyana WNUF Terevhizheni Inokosha, asi isina kunyatso kufanana nayo, futi. Kana iwe uchida makumi masere makumi masere mafirimu mafirimu, iwe uchachera Mafupa muKamuri. Zvicherere wega pano kuVudu.
Idzi Imbwa Denda (1982), neruremekedzo Embassy Mifananidzo.
Senge kana director Martin Rosen vasina kukanganisa hukama hwako zvakakwana ne Mvura Kuderera, akadzoka muna 1982 aine Imbwa Dambudziko. Ichi chimiro chehupenyu chine dzinenge mbiri imbwa dzinopukunyuka dzinotiza zvinotyisa zverabhoritari yekuyedza lab, chete kuzotarisana nezvimwe zvinotyisa kunze kwenyika sezvo ivo vachiita kwavo kushuvira kumhanyisa rusununguko.
Imbwa Dambudziko katuni, asi zvichiri zvinoshungurudza uye zvinotyisa. Kunyangwe hazvo mhirizhonga yakanangidzirwa kuvanhu, imbwa ndidzo dzinonzwira tsitsi. Iyi ichave yakaoma kutarisa kune vanoda imbwa kunze uko. Wanyeverwa. Maona Imbwa Dambudziko pano paTubiTV.